Wararka - Doofaarka iyo ukunta waxay u duulaan hadhuudhka waallida, suuqa amino acidku wuu joojiyaa inuu dhaco oo qaado
Waxyaabaha Farmasiga & Qurxinta lagu daro
Doofaarka iyo ukunta waxay u duulaan hadhuudhka waallida, suuqa amino acidku wuu joojiyaa inuu dhaco oo qaado
Markii la sii daayo awoodda cusub ee la kulanta fayraska taajka cusub ee xanaaqa iyo keenista baahida, bilihii la soo dhaafay, amino acids aad u qallafsan ayaa ka soo dhacay buurta dusheeda ilaa dooxada hoose, sida lysine, threonine, tryptophan, valine , iwm), halka hadhuudhka alaabta ceyriinku uu ku sii siqayo jidka oo dhan, isagoo waalan kor u kaca. Shirkadaha amino acid-ka waxaa ku dhacay dharbaaxo laba-geesood ah oo ka timid kharashka iyo qiimaha. Marka lagu daro mudada dayactirka heerkulka sare, heerka waxsoosaarka warshaduhu hoos ayuu u dhacay, tirada soo saarayaasha joojiya warbixinta iyo kor u qaadista qiimaha ayaa kordhay. Taranka gudaha ayaa dib u bilaabay. Wanaagsan, suuqa amino acid ayaa joojiyay inuu dhaco oo la soo qaado dhamaadka bisha, iyo iibsashada iyo iibku way fiicnaadeen. Waqtigan xaadirka ah, qiimaha suuqa 98% lysine waa RMB 7-7.5 / kg, qiimaha methionine waa RMB 18-19 / kg, qiimaha threonine waa RMB 8-8.5 / kg, iyo qiimaha tryptophan waa RMB 43.5 -46 / kg.
Soo-saarayaashu waxay joojiyaan wax-soo-saarka waxayna si joogto ah u soo sheegaan macluumaadka
Toban xaraash oo isku xigxiga hadhuudhkii ku meel gaadhka ahaa ayaa lagu arkay macaamil ganacsi oo aad u sarreeya iyo khidmad cayiman. Suuqa galleydu waa kulul yahay, iyadoo ay koror ka badan tahay 100 yuan halkii tan tan iyo bilawga bisha. Qiimaha celceliska suuqa ee hadda 2275.26 yuan / ton ayaa u kacay meeshii ugu sarraysay shantii sano ee la soo dhaafay. Cuntada soybeyska ayaa iyaduna raacday. Bilowga bisha, waxay sare u kacday 200-300 yuan / tan. Corn waa walaxda ceyriinka ee amino acids khamiir ah sida lysine, threonine, iyo tryptophan. Shirkadaha waxsoosaarka qotada dheer ee Corn ayaa sii wadaya inay kordhiyaan qiimaha wax iibsiga, shirkadaha quudintuna waxay kordhiyeen kharashka agab waaweyn iyo bedel awgood. Qiimaha kor u kaca wuxuu u dhexeeyay 50-100 yuan / tan. Baahida loo qabo balaadhinta awooda amino acid sanadkan waa daciif tahay, ganacsatadu waxay iibiyaan badeecada, soo saarayaasha waxay yareeyaan sicirka si kor loogu qaado macaamil ganacsi, hoos u dhigida alaabada si loo yareeyo qasaaraha loona yareeyo cadaadiska alaabada.
Hagaajinta soo kabashada beeraha gudaha
Burucu waxay ubaxday koonfurta bartamihii-dabayaaqadii bishii Luulyo, xaaladda daadadkuna way gaabisay dhammaadka bisha. Bishan, waxtarka beeraha digaagga ee guryaha ayaa hagaagay, digaagga iyo ukunta ayaa kordhay, qiimaha doofaarkuna wuu kordhay. Haddii ay aad u tahay Tailai, ukunta ayaa luntay in ka badan nus sano. Gelitaanka marxaladda dib-u-celinta, heerarka ukunku si tartiib tartiib ah ayuu kor ugu kacay bishii Luulyo, iyo kuwa ka ganacsada beedku waxay khasaarihii u beddeleen faa'iido. Marka loo eego raadraaca xogta Huitong, laga soo bilaabo 31 Luulyo, celceliska qiimaha ukunta wuxuu ahaa 8.05 yuan / kg, koror 70% ah bilowgii bisha. Tan iyo bilowgii sanadkan, daadadku waxay sababeen 33.85 milyan oo masiibooyin ah 27 gobol (ismaamulada iyo degmooyinka) oo ay kujiraan Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, iwm. Faa'iidada beeraha doofaarka. waa mid aad u weyn, oo tirakoobka doofaarka gudaha ayaa sii wanaajinaya. Marka loo eego 4000 kormeerka barta go'an ee Wasaaradda Beeraha iyo Arrimaha Reer Miyiga, kaydka doofaarrada iyo abuurka abuurka ee qoysaska taranka ayaa kordhay 5 bilood oo isku xigta.
Isku soo wada duuboo: yaraanshaha sahayda, kharashyada badan, fikradaha soo saarayaasha ee sicirka ayaa sii kordhaya, iyo cudurada faafa ee gudaha ayaa si sax ah loo xakameynayaa. Baarayaasha qaar waxay yiraahdaan waxaa suuragal ah in talaalada la heli karo si loo isticmaalo guga soo socda, isticmaalka warshadaha cuntada ee gudaha ayaa soo hagaagaya, warshadaha aquaculture-ka ayaa si tartiib tartiib ah u soo kabanaya, iyo qiimaha cuntada soybeerka oo sare u kacay. Suuqa oo laga door biday baahida loo qabo amino acids, ayuu suuqii joojiyey inuu soo dhaco oo uu soo kabto, suuquna wuu xasilloonaa oo si xoog leh ayuu qabtay. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha faafa ee shisheeyaha ayaa wali ah kuwo aad u daran, iyadoo ku dhowaad 200,000 kiisaska cusub ee la ogaado maalin kasta. Kuwaas waxaa ka mid ah, Mareykanka, Baraasiil, Hindiya, Ruushka, iyo Koonfur Afrika gaar ahaan daran. Baahida shisheeye wali wey daciif tahay, shirkadaha ugu badan ee wadankuna dib ayey u buuxsameen keydkooda, iyagoo hor istaagaya dib u soo laabashada suuqa.
Waqtiga boostada: Oct-26-2020
L-Valine 72-18-4, Fasalka L-Threonine Pharm, 73-32-5 L-Isoleucine, Nafaqada xoolaha, Fasalka Cuntada L-Threonine, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine,
Telefoonka:0086-139 3310 4395
Cinwaanka:Qolka 1-1-2103, No. 549 Taihua Street, Magaalada Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha